About Us - Mark Hongsheng iingxowa yokugquma Co., Ltd.
Shenzhen Zhaohongsheng neebhegi umenzi yasekwa ngo-2008 njengoko taxer indalo. Kukho mveliso sub-isebe ogama Shenzhen Zhaohongsheng igqunyiwe luggle kunye nenkampani iibhegi. iimveliso yethu bag thermal, ibhegi pizza, ibhegi ukudla, iingxowa pizza eshushu, ibhegi imela, yokutyela bill nangxowa yamphako, clip Menu. iimveliso zethu ngokubanzi isicelo ukutya, amayeza, lokutya, ingqele distribution chain. Le enterpriser onokuqala kuyilo bathela zigqunyiwe iibhegi ukudla. Okwangoku iimveliso zethu ziye bonke phezu kwephundu imarike yaseTshayina, kwaye zithunyelwa kulo lonke ihlabathi.
ungabona iimveliso zethu yonke e China market.volving oversea ezahlukeneyo sifakwe nokuthunyelwa ehlabathini. Besisoloko ukugcina intsebenziswano elide ngokutya lokutya nengqele distribution chain stably. I "Zhaohongsheng" ibhegi brand inthermal wachukumiseka entliziyweni yabantu. Umgangatho kweemveliso kunye nenkonzo engeniswa luluntu.
Kunye nokwandisa imarike ngokuqhubekayo, le mveliso original kunzima ukuhlangabezana nemfuno kubathengi. Efektri yethu lafuduselwa e No 35, Anxing Road, ofisi street Henggang Shenzhen ngoMeyi 2017.It yi-ibekwe kakuhle kwaye lula ukufikelela (lula imeko). Indawo entsha nemangalisayo wathinjwa 5000 square metres workshop. Izakhiwo okuzalisekileyo indawo elungileyo kuquka kunye nokusingqongileyo usizo umsebenzi nobomi.
Enterpriser injongo: Professional, ingqibelelo, iingxowa isuphamakethi isothermal, eetalente isiseko uqeqesho
Enterpriser icebiso: Professional, ukholo elungileyo, umgangatho ophezulu, ukusebenza phezulu, ixabiso engcono kwaye ithembekile
Injongo Service: Based on ezintsha zobuchwepheshe ngokusebenzisa omkhulu mveliso ukunciphisa iindleko, i kwizinga eliphezulu kunye ixabiso ezingabizi kakhulu kunye nenkonzo kakhulu ogqibeleleyo ziya kunikwa umgangatho games, iimveliso abazizityebi singayeki
kwaziswe utsaleleka, ukuqaliswa ubugcisa, izixhobo kunye nabasebenzi, kunye nokomeleza amandla R & D
Zonke iingxowa yokugquma thermal ukuba abathengi kucinga of zingafunyanwa apha
Naluphi na iingxowa isothermal nantoni abathengi abanokucinga ngazo ziza kufunyanwa apha